Vondrona Solombavambahoaka « G5 » : « Mangataka ny firotsahan’i Hery Rajaonarimampianina » -
AccueilRaharaham-pirenenaVondrona Solombavambahoaka « G5 » : « Mangataka ny firotsahan’i Hery Rajaonarimampianina »
Tsy misy afa-tsy ny firotsahan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ny fifidianana ho avy io no antoky ny fitohizan’ny fampandrosoana efa napetrany tao anatin’izay fotoana nitondrany ny firenena izay, hoy ny depiote Nicolas Randrianasolo mpikambana ao anatin’ny vondrona Solombavambahoaka “G5” tetsy amin’ny hotel Colbert omaly.
“Mangataka ny firotsahany izahay, satria tsy vita hatramin’ny farany ny fampandrosoana napetraka hatramin’izay raha tsy tohizany. Hetahetanay koa ny mba hijereny dieny izao ireo tompon’andraikitra tsy mahavita na inona na inona kanefa dia mandray karama fotsiny. Misy amin’ireny tompon’andraikitra any anaty minisitera ireny no hita miharihary fa tsy vonona ny hanohana anao andriamatoa filoha, ka na ny hanonona ny anaranao aza tsy hataony. Esory ireny fa sakana ho an’ny fampandrosoana mbola hapetraka. Misy amin’ireo minisitra ihany koa no mialokaloka fotsiny ao anaty governemanta ao, ary tsy hita maso mivantana akory izay mba asa vitany. Tsy sahy mijoro rehefa misy ny mpitsikera an’izao fitondrana izao ireny minisitra ireny. Misy kosa anefa ny tena sahy mijoro miaro an’izao fitondrana izao”, araka ny fanambarana nentin’ireto vondrona Solombavambahoaka “G5” ireto.
Ny depiote voafidy tany Betroka Jean Nicolas Randrianasolo sady filohan’ny vaomieran’ny fandriam-pahalemana eo anivon’ny Antenimieram-pirenena no mitarika azy ireo. Mpikambana ao anatin’ity vondrona ity koa ny depiote voafidy tao Mananjary Kathy, ny depiote voafidy teny amin’ny boriborintany faha-6 Raherisoa Vololona, ny depiote voafidy tao Manakara Razafimahatratra Abel, ary ny depiote Hanitriniaina Armand depioten’i Miandrivazo, izay samy tonga teo amin’ny Colbert avokoa omaly.
Mikasika ny lafin’ny fandriam-pahalemana kosa indray, dia notsindrian’ny depiote Nicolas Randrianasolo, fa efa hita ny ezaka nataon’ny fitondram-panjakana. “Tokony hampitomboina ny karaman’ireo miaramila ireo. Rehefa manana ny karama ampy azy mantsy izy ireo, dia tsy alaim-panahy hanao kolikoly, na hanao zavatra hafa ankoatra ny andraikitra efa nankinina taminy”, hoy ny fanazavany.